Liyuu Boolis: Dhimasho Doofaar – Rasaasa News
Jijiga, Apr 27, 2014 – “Xubnaha ciidanka Liyuu Boolisku kolka ay dhintaan, waa la xabaal nololiyaa” sidaas waxaa yidhi Xaashi Cabdullahi.
Xog aan hore loo ogayn waxaa noo sheegay ehelka xubin Liyuu Booliska ka tirsanaan jiray oo dhawaan ku dhintay magaalada Jijiga.
Xaashi Cabdullahi wuxuu Abti u yahay Saddex Alifle Xuseen Macalin oo ka tirsanaa LB-ka dhawaana ku dhintay Jijiga. Xaashi ayaa u sheegay xafiiska warqabadka ee Jijiga in ay ku dhacday arin laga xumaado.
Xaashi wuxuu sheegay Xuseen Macalin iyo labo wiil oo LB ah oo ay saaxiib yihiin ay ku qayileen gurigiis habeen, ka hor inta uusan dhiman. “Wiilashu habeenkii oo dhan bay qaad iyo Tv ku soo jeedeen, aroortii iyaga oo seexday baan ka tagay” ayuu yidhi Xaashi
4-tii subaxnimo [10 am], ayaa telephone la ii soo diray oo la ii sheegay in xanuun adag uu hayo Xuseen. Bajaaj baan soo qaatay waxaan u imid Xuseen oo aan hadli karin oo caloosha haysta.
Isbitaalka Kaaraamardha ayaan geeyey, waxaa i raacay labadiisa saaxiib. Muddo ka dib dhakhtarka ayaa sheegay in uu dhimanayo, labadii wiil ayaa la hadlay xeradii uu ka tirsanaa oo ka soo horjeeda xafiiska Cadaalada.
Dhakhtarku wuxuu sheegay in uuna waxba ka qaban karin oo ay xiidmuhu xidhmeen, calooshana nabar kaga yaalay.
Muddo yar ka dib waxaa yimid Isbitaalka gaadhi ciidan ah, waxayna xoog ku qaadeen Xuseen oo ay naftu ku jirto, waxaan damcay in aan raaco wayna i diideen.
Xeradii LB ee uu ka tirsanaa ayaan Bajaaj u qaatay, waa la ii diiday in aan galo. Guriga ayaan ku laabtay anoo aad u murugaysan, walaashiis, Aayadii iyo dad Qaraabo ah, ayaa iyidhi xerada na gee. Waxaa nalagaga hor yimid Afaafkii hore ee xerada kolkii la maqlay oohinta haweenka, mar labaadkiina waa na loo diiday.
Anaga oo ooyeyna ayaan guriga ku soo noqonay, meel lagu xabaalay tan iyo maanta kama warhayo, waxaanan filayaa in ay xerada ku dhex xabaal noloyiyeen. Waan agasnay Quraana waan u akhrinay Janadii Eebe ha geeyo. Xaashi Cabdullaahi ayaa sheekada ku dhacday nooga sheekeeyey.
Xogsi dheer ka dib RasaasaNews, waxay ogaatay in xubnaha Liyuu Boolisku kolka ay dhintaan sabab kastaba aan lala socodsiin ehelkooda. Waxaana lagu dhex xabaalaa kuwa magaalada ku dhinta xeryaha LB.
Xubin sare oo ka tirsan taliyeyaasha LB, oo aan loo baahnayn in aan magacawno ayaa sheegay in arintan laga dhaxlay dagaaladii lana qabatimay. Anaguna waxba kama qaban karo ayuu yidhi sarkaalku.
Arinta ayaa ah arin aad u xanuun badan lidna ku ah dhaqanka Somalida iyo diinta Islaamkaba.